Ciidamada Puntland oo howlgal kula wareegay degaano ka tirsan Gobolka Sanaag - Awdinle Online
Ciidamada Puntland oo howlgal kula wareegay degaano ka tirsan Gobolka Sanaag
Ciidamo ka tirsan kuwa Daraawiishta dowlad Goboleedka Puntland ayaa waxaa la sheegay inay howlgal ku tageen degaano ka tirsan gobolka Sanaag, kuwaas oo dhawaan lagu arkay Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab.
Ciidamada Daraawiishta Puntlandoo wata Gaadiidka dagaalka ayaa waxaa la sheegay inay howlgalka ku gaareen degaano hoostaga Magaalada laasqoray ee Gobolka Sanaag, halkaas oo dhawaan ay Al-Shabaab sheegteen inay la wareegen.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada Daraawiishta Maamulka Puntland ayaa waxaa ay Warbaahinta u sheegeen inay Ciidamada Puntland la wareegeen degaanka Gurya-samo iyo degaannada ku dhow dhow si amniga ay u xaqiijiyaan.
Sidoo kale waxaa ay sheegeen in howlgalkaan uu ahaa mid ka dhan ah Ururka Al-Shabaab oo doonayay inay la wareegaan degaano ka tirsan Gobolka Sanaag, walow markii dambe ay isaga baxeen.
Saraakiisha Ciidamada ayaa waxaa ay kulan la qaateen Odayaasha & waxgaradka degaanka Gurya-samo, iyaga oo kala hadlay sidii la isaga kaashan lahaa sugida Amniga loogana hortegi lahaa Al-Shabaab.
Deegaannada gobolada Sool & Sanaag ayaa waxaa ay yihiin meelaha ugu amniga wanaagsan Soomaaliya, hayeeshee waxaa la sheegaa in Xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku sugan yihiin buuraleyda Calmadow ee gobolka Sanaag.
Previous articleMusharixiinta Guddoonka Baarlamaanka Hir-Shabeelle oo Maanta is diiwaangelinaya
Next articleXOG: Maxay ka wada hadleen Sheekh Shariif & Cali Guudlaawe?